तिथि मेरो पत्रु » शीर्ष पांच अनलाइन डेटिङ सुरक्षा उपाय
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जुलाई. 10 2020 |3मिनेट पढ्न
बस परम्परागत डेटिङ रूपमा, अनलाइन डेटिङ केही जोखिम यो संग पूरा गर्छ. त्यहाँ सधैं खराब वा हानिकारक मनसाय संग बाहिर त्यहाँ मान्छे हुन जाँदैछन्. धेरै अनलाइन डेटिङ सेवाहरू केही अपराधीलाई वा विवाहित मानिसहरू बाहिर पान को लागि छनोट र सुरक्षा उपायहरु लागू गरेको छ जबकि, यस आसान कहिल्यै छ, र यो आफ्नो हातमा सुरक्षा कदमहरू चाल्न पुरा व्यक्ति को माथि छ.
यहाँ अनलाइन डेटिङ गर्दा आफैलाई सुरक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण छ भनेर पाँच अनलाइन डेटिङ सुरक्षा उपाय हो:
1. आफ्नो इमेल खाता गुमनाम बनाउन. हटमेल या याहू जस्तै एक मुक्त इमेल खाता सेवा प्रयोग! कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी दिन गर्दैन एक इमेल खाता सेट. आफ्नो काम इमेल ठेगाना वा अनलाइन डेटिङ म्याच सञ्चार गर्दा आफ्नो पूरा नाम सङ्केत गर्छ कि एक ठेगाना प्रयोग नगर्नुहोस्. साथै, पनि चाँडै आफ्नो इमेल ठेगाना दे छैन. तिनीहरूले स्पैम सन्देश बाहिर पठाउन सक्नुहुन्छ भनेर निर्दोष एकल इमेल ठेगाना जम्मा गर्न अनलाइन डेटिङ सेवाहरू प्रयोग भनेर बाहिर त्यहाँ केही मानिसहरू छन्.
2. जब अनलाइन डेटिङ को फोन कल चरण मा आफ्नो सेल फोन नम्बर भन्दा आफ्नो घर नम्बर दिनुहोस्. तपाईं फोन पुस्तकमा सूचीबद्ध भने, आफ्नो घर फोन नम्बर दिन आफ्नो पूरा नाम र घरको ठेगाना दिइरहेको रूपमा व्यावहारिक नै छ. अनलाइन प्रविधी संग, यो Google मा एक घर फोन नम्बर टाइप गर्न सजिलो छ, र, संख्या सूचीबद्ध छ भने, आफ्नो नाम र ठेगाना फोन नम्बर संग देखाउने हुनेछ. तपाईं के तपाईं हुन् जस्तो लाग्छ भन्दा बढी जानकारी दिने हुन सक्छ.
3. आफ्नो पहिलो केही तिथिहरु मा सार्वजनिक ठाउँमा भेट्ने. त्यहाँ वरिपरि धेरै साक्षी हुनेछ र आफ्नो मिति आफ्नो घर ठेगाना थाहा छैन हुनेछ एक सार्वजनिक ठाउँमा सुरक्षा र सुरक्षा को एक उच्च स्तर आश्वासन दिनुभएको छ. यो तपाईं हुनेछ जहाँ एक मित्र बताउन पनि एक असल विचार हो र तपाईं हुनेछ फर्केपछि, सिर्फ मामला मा.
4. सधैं पैसा मागेर कसैको थकित हुन. तिमीलाई भेट्न अघि तपाईं एक अनलाइन डेटिङ सेवा मार्फत कुराकानी कसैले पैसा लागि तपाईं सोधेर शुरू भने, तपाईं लगभग तिनीहरूले घोटाला कलाकार हुन्छन् ग्यारेन्टी गर्न सक्छन्. बाहिर त्यहाँ महिलाहरु गरेर पैसा बाहिर घोटाला सोझो मानिसहरूलाई प्रयास ìRussian Brideî एजेन्सी छन् (कहिलेकाहीं महिला पनि साँच्चै अवस्थित छैन) बाहिर उडानहरू तिनीहरूलाई देख्न लागि मानिसहरूलाई देखि मुद्रा सोध्न, तिनीहरूले पैसा पाउने पछि मात्र गायब. अनलाइन डेटिङ अन्य व्यक्ति पैसा दिने समावेश गर्नुपर्छ भनेर कुनै कारण छैन. तपाईं स्लोभेनिया मा IVETA भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने, उनको हेर्न बाहिर उड, अन्धा उनको पैसा दिन्छन् छैन.
5. आफ्नो पेट भरोसा. आफ्नो पेट वृत्ति तपाईं बताउँछ भने एक मान्छे या केटी तपाईं सत्य बोलेका छैन, खराब मनसाय छ, वा तपाईं चोट अन्त हुनेछ, कि वृत्ति सुन्न. तपाईं कुनै पनि रातो झण्डा सूचना भने, यस्तो व्यक्तिगत जानकारी को लागि पनि चाँडै थिचेर रूपमा, पहिलो मिति लागि आफ्नो घरमा तपाईं टिप्न जोड, तिमीलाई भेट्न पनि अघि वा possessive चाहनाले, आफ्नो फोन नम्बर गर्नेबारे दुई विचार, इमेल ठेगाना, वा विशेष गरी घर ठेगाना. साथै पहिले नै विवाह हुन सक्छ व्यक्तिलाई लागि एक नजर राखन. तिनीहरूले चाहनुहुन्छ कहिल्यै भने तपाईं कल गर्न, आफ्नो जीवनशैली विवरण दिन छैन, र गोप्य सबै पालन गर्ने प्रयास, तपाईं विवाहित व्यक्ति संग काम गर्दै एक संभावना छ.
केही डेटिङ साइटहरूमा पृष्ठभूमि चेक टाउट तापनि कि सम्झना, तपाईं आफ्नो होसियार रहन छ. मान्छे त अपराधी र विवाह चेक तपाईंलाई सुरक्षाको झूटो अनुभूति गरून् छैन पृष्ठभूमि चेक दरार को माध्यम पर्ची गर्न सक्छन्. अनलाइन डेटिङ गुणस्तर एकल मिलन एक सुरक्षित र मजा तरिका हुन सक्छ, तर दी केही पनि लिने र सधैं सुरुमा आफ्नो गार्ड राखन कहिल्यै.